Soomaali / Waxbarashada khaaska ah ee Dhalaanka yar yar (ECSE)
Waxbarashada khaaska ah ee Dhalaanka yar yar (ECSE)
Waalidiinta qaba waxii su'aala ah ama walaac ku saabsan horumarka ilmahooda waxay ka faaiidaysan karaan qiimaynta iyo adeegyada waxbarashada khaaska ah ee Early Childhood (ECSE). ECSE waa isuduwaha St. Cloud ka caawiya taageerida carruurta da'doodu tahay dhalashada shan jirka ah oo loo aqoonsadey ineey jirto dib u dhac koritaan ama curyaanima kale. Carruurta da'doodu u dhaxaysa dhalashada ilaa saddex sano ayaa helaya adeegyada guriga ama daryeelka ilmaha. Caruurta da’doodu tahay saddexda iyo afar sano jirka ah ee qaba baahida khaaska ah ayaa dhamaan lasiinaya iskudarka guud ee fasallada Colts Academy ee ku yaala St. Joseph, Clearview, Discovery, Kennedy, Madison iyo Iskuulka Hoose ee Oak Hill
Qiimaynta Dhalaanka yar yar
Kooxda Qiimaynta Dhalaanka yar yar (Early Childhood) iyo Gobolka ayaa iga caawinaya nidaamka shaqada iskaashiga si loo ogaado carruurta da'da dhalashada ilaa shan jirka ah ku waasoo muujinaya dib u dhac koritaan ama xaalad caafimaad oo saameyneysa koritaankooda. Hadafka kooxda waa in ay ka caawiyaan ilmahaagu ineey wax noqon karaan.
Kooxda waxay qiimeeysaa dhallaanka, socod baradka iyo carruurta barbaradka ah si loo ogaado inay u qalmaan ECSE . Kooxdu waxa ay sidoo kale ila macluumaad u tahay waalidiinta qaba waxii su'aala ama walaac ku saabsan horumarka ilmaha. adeegyadan ayaa ah kuwa lagusiinayo qoysaska lacag la’aan.
Xaga ugudbinta, xubin kamid ah kooxda ayaa imtixaameysa waalidka ama masu’alka rasmiga ah si ay u soo ururiyaan xog ku saabsan xirfadaha taariikhda caafimaad iyo koritaanka ilmaha. Macluumaadka ayaa dib loo eegayaa si loo ogaado haddii loo baahan yahay baadhitaan dheeraad ah. Haddii qiimaynta la dhameystiro oo ilmaha buuxiya shuruudaha waaxda Gobolka Minnesota ee naafanimada, ilmaha waa ay u qalmaan in ay helaan adeegyada Waxbarashada khaaska ah.
Inta badan Kooxda Qiimaynta Early Childhood ayaad ka heli kartaa ciwaankan ah: Colts Academy, 124 First Ave SE., St. Joseph, MN 56379.
Nagalsoo Xidhiid Macluumaadkan
Nagasoo wac: 320-253-5828 ext. 5703 or 320-252-0415
E-mail noogusoo dir Ciwaankan hoos ku xusan:
Halkeen kaga jirna Dugsiyada Degmada 742: Kooxda Qiimaynta Early Childhood waa qayb ka mid ah Taageerada Ardayda Waaxda Dugsiyada Degmada 742.